Wadaada Xumayaal Ku Shiray Magaalada Istanbuul oo Fatwo kusoo saaray "Ciidanka Turkiya in uu ku duulo Dowladda Islaamiga ah Way Banaantahay".
Sunday August 09, 2015 - 17:20:54 in Wararka by Super Admin
Ciidanka Calmaaniyiinta Turkiya ayaa isku diyaarinaya duullaan ay ku qaadaan waqooyiga wadanka Suuriya oo ay ka jiraan maamulli islaami ah oo dadka sharciga islaamka ku maamulo.
Xukuumadda Turkiya oo tariikkh xun ku leh duullaanada Mareykanku ku qaaday caalamka islaamka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay qeyb ka tahay isbaheysiga 60-ka dowladood ka kooban ee Mareykanku ku iclaamiyay mujaahidiinta dowladda Islaamiga ah.
Rajeb Dayib Erdogaan Madaxweynaha Turkiya iyo Brack Obama oo khadka taleefanka ku wadahadlay ayaa isla gartay in ciidanka cirka Mareykanka ay isticmaalaan saldhigga melleteri ee Enjarliik oo 160KM ujira waqooyiga Suuriya.
Turkiya iyo Mareykanka waxay ku heshiiyeen in ay iska kaashadaan la dagaalanka dowladda islaamiga ah oo maamusha dhul ballaaran oo Ciraaq iyo Suuriya katirsan.
Kumanaan katirsan ciidamada Turkiya ayaa lasoo dhoobay meel ku dhaw xadka suuriya waxaana la sheegay in ay isku diyaarinayaan weerar ay ku qaadaan waqooyiga magaalada Xalab si kooxaha mucaaradka dhax-dhaxaadka Suuriya ay ugu qabtaan magaaloyinka Jarabulis,Manbaj iyo Albab oo dowladda Islaamiga ah maamusho.
Sida caadada ah Turkiya waxay kulmisay wadaada xumayaal ay kasoo aruuriyeen wadamada carabta si ay sharciyadda ugu raadiyaan duullaanka ka dhanka ah mujaahidiinta.
Kooxo wadaada xumayaal ah ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Istanbul waxay kasoo saareen Fatwo banaynaysa in ciidanka Turkiya ay weerari karaan Suuriya si ay ula dagaalamaan dowladda Islaamiga ah.
"Waa sharci in ciidanka Turkiya ay ku duulaan suuriya si ay ula dagaalamaan IS ayna nabad uga dhigaan gobolka Xalab”ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay culimada ku shirtay Turkiya.
Xukuumadda Turkiya ayaa duullaan melleteri iyo mid akhlaaq darro ku qaaday wadamo ay kamid yihiin Afghanistan iyo Soomaaliya waxaana xusid mudan in Turkiya qeyb ka tahay isbaheysiga NATO.